China CNC nkqo Machining Centre mveliso kunye nabenzi | UOturn
Iziko loomatshini be-OTURN lenziwe ngowona mgangatho uphezulu we-Mihanna waphosa umzimba wentsimbi kunye nenkxaso yobambo olupheleleyo, ephindaphindwe kalishumi ukothusa ngakumbi kunocingo lwentsimbi oluqhelekileyo. Ukuphoswa kweembambo ngaphakathi kwefuselage kuye kwandiswa
Iziko loomatshini be-OTURN lenziwe ngowona mgangatho uphezulu we-Mihanna waphosa umzimba wentsimbi kunye nenkxaso yobambo olupheleleyo, ephindaphindwe kalishumi ukothusa ngakumbi kunocingo lwentsimbi oluqhelekileyo. I-castings ngeembambo ngaphakathi kwe-fuselage ine-torsion ephezulu kakhulu yokuxhathisa kunye nokuxhathisa okukhulu. Ukongeza, indawo ebanzi yangaphakathi ivumela umqhubi ukuba atshintshe ngokulula izixhobo kunye nezinto zomsebenzi. Ngobungqongqo obuphezulu, idala indawo encinci, kodwa ngokuchaneka okuphezulu kunye noomatshini abaninzi beebhaktiriya.
U-Ou Teng usebenzisa iimveliso ezaziwayo zokuqina okuphezulu kunye nokuchaneka komgaqo wesilayidi. Inkqubo yayo yetekhnoloji ifana neebheringi zokuvelisa, ngaphandle kwezero kunye neempawu ezijikelezayo. Isilayidi somgama sinokusetyenziswa okuphantsi, ukuchaneka okuphezulu, kunye nesantya sokuhamba ngokukhawuleza, ukuya kuthi ga kwi-48 yeemitha ngomzuzu.
Umatshini uxhotyiswe ngezibane eziphezulu zokukhanya, ezilungele ukuba umqhubi alayishe kwaye athule izinto zokusebenza kunye nokwenza imilinganiselo. Ukukhanya komsebenzi kunemisebenzi yokungabi nothuli, ukungena kwamanzi kunye nobungqina bokuqhushumba.
Isixhobo sokutshintshiselana ngesixhobo esikhawulezayo, esilula, esinokuthenjwa kunye nobomi bexesha elide sibonelela ngotshintsho lwezixhobo. Uyilo oluyingqayizivele lwesixhobo sokutshintshela isixhobo, ukukwazi ukukhetha izixhobo kuso nasiphi na isikhundla, kunokufikelelwa ngokukhawuleza ngokulawulwa kwesoftware ye-PLC.
Uhambo lwe-X axis
Ukuhamba kwe-axis Z
Umgama ukusuka empumlweni yokusonta ukuya kusetyenzwa
Umgama ukusuka embindini wentsimbi ukuya kumphezulu womkhondo wekholamu
Ubuninzi bomthwalo webhentshi
Ukususwa chip chip kabini
Isixhobo sokususa i-chip esisijikelezileyo, esibethwe kumatshini wokususa i-chip kumacala omabini omatshini, sinokuthumela ngokulula iichips zentsimbi eqhubekekayo ngaphandle komatshini ngokukhawuleza, ukunciphisa inkunkuma yexesha elingaqhubekiyo ngenxa yokususwa kwentsimbi .
Bonke oomatshini basebenzisa imilinganiselo ye-laser, uvavanyo lokusika, uvavanyo lwexesha elide lokuhlola kunye novavanyo olungqongqo ngokwemigangatho yeVDI 3441, ukuze i-axis nganye inokuphindeka kakuhle kunye nokuma ngokuchanekileyo, ukuqinisekisa ukuchaneka komatshini.
Isixhobo sokulinganisa setyhula esithi Renishaw sisetyenziselwa ukulungisa ukujikeleza kunye nokuchaneka kwejiyometri kumatshini, ngaloo ndlela kujongwa kwaye kuqinisekiswa ukuchaneka okuthe nkqo kwendawo enamacala amathathu.
Uyilo sleeve-uhlobo yokuluka ibonelela 6000 / 4500rpm gear-oluqhutywa yokuluka okanye ibhanti-uhlobo yokuluka, kwaye elifutshane-ngefoyile ethwele ethwele ixhaswa ngempumelelo emkhonweni kunye intloko eyahlulayo, ngoko ke ukuphucula kakhulu ngqongqo yokuluka. Imoto yokuluka inokubonisa ubuninzi bezinga lokusika isinyithi. Ngenkqubo yokupholisa yokuluka, ukunyuka kwamaqondo obushushu okuphatha kunokuncitshiswa ukwandisa ubomi be-spindle.
Egqithileyo Uhlobo Gantry 5-axis Milling Machine
Okulandelayo: Uhlobo lweFlat eyiLathe